हाम्रोगाईघाट . ब्लगस्पोट . कम: पत्याउन गाह्रो तर सत्य , खसी गाडा पनि सुनसरीमा
पत्याउन गाह्रो तर सत्य , खसी गाडा पनि सुनसरीमा
2:32 AM भुवन राउत
इनरुवा , चैत १२ गते । हामी तपाईले सुनेको वा देखेको कुरा गोरु गाडा ,रागाँ गाडा, तथा घोडा र हातीमा मान्छे चढेको कुरा , तर हामी र तपाईलाई पत्याउन गाह्रो लाग्ने कुरा खसीले पनि गाडा तानेको कुरा । सुनसरीमा पहिलो पटक नभएर नेपालमै पहिलो पटक दुई वटा खसिको सहयोगमा खसी गाडा संचालन गर्न सफल भएको छ । विभिन्न जनावरमा मानीस चढ्ने गरेको सवैले हेरेकै , देखेको र सुनेको कुरा भन्दा फरक काम गर्न सफल हुनुभएको छ ।
सुनसरीको औरावनी गावीस ५ निवासी नारायण यादव , २ वर्ष ८ महिनाको उमेर भएको दुईवटा खसिको सहयोगमा खसी गाडा संचालन गर्न सफल हुनुभएको हो । रिक्साको दुई वटा टायर जडान गरी जनावरलाई जोत्ने गाडी वा टाँगामा जोत्ने जस्तैं यादवले खसी गाडा संचालन गर्न सफल हुनुभएको छ । देशमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भईरहेको समयमा खसीको क्षमताको विषयमा अनुसन्धान गर्न खसिको गाडी वनाएको यादव वताउनुहुन्छ । यादवले खसीलाई भारी वोक्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गोरु जस्तै गाडा सिकाउनु अगाडी केराको थम्वामा सिकाएर नयाँ गाडाको आविष्कार गरी खसी गाडाको विकास गरेर आश्चर्य जनक कार्य गर्न समेत सफल भई आश्चर्यलाई सहज वनाउनुभएको छ ।
सुनसरीको औराबनी ५ आफनै घरवाट दुहवी सम्म ७ किलो मिटरसम्म यात्रा गर्ने
क्रममा सफल हुनुभएको नारायण यादव ।
देशको विभिन्न भागको भ्रमण गर्दा नदेखीएको तर १४ वर्षको उमेरमा वावुले केही गरी नाम कमाउनु र समाजमा उदाहरणीय वन्नु भएकाले सोही प्रेरणामा खसी गाडा वनाएको र सफल परिक्षण समेत गरेको यादवको भनाई रहेको छ । हाल सुनसरीको औराबनी ५ आफनै घरवाट दुहवी सम्म ७ किलो मिटरसम्म यात्रा गर्न सफल हुनुभएको यादवले इनरुवा , इटहरी , धरान सम्म पुरयाउने योजनामा रहेको वताउनुभयो । सप्तरीमा जन्मिनु भएका ६० वर्षिय यादवमा नयाँ कुराको आविस्कार र खोजको उत्सुकता रहेको र निकट भविष्यमा कुकुर गाडा संचालनमा ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ । यादवले चैत्तको पहिलो सातावाट खसिको गाडी संफल रुपमा संचालनमा ल्याउनुभएको थियो ।
अरुले अफनो कृतिमानी कायम गर्न विभिन्न काम तथा उपायहरु अपनाउने जस्तैं यादवले आफनो नाम चर्चामा ल्याउन यस्तो काम गरेको पत्रकार तुलसी यादव वताउनुहुन्छ । आश्चर्यको कुरा के भने गाडी र चालक गरी दुवैको तौल १३० केजि हुन्छ तर दुई खसिको तौल ९० केजि मात्रै रहेको छ । यहाँ दैनीक जसो खसी गाडा हेर्न यादवको घरमा भिड लाग्ने गरेको छ । यसरी पत्याउन गाह्रो तर सत्य भएको कुरा सुनसरीमा खसी गाडा पनि संचालन गर्न एक कृषक सफल भएकाले सुनसरीवासी खुसी छन् ।
समाचार \_ तस्विर - जयकृष्ण यादव, इनरुवा
No Response to "पत्याउन गाह्रो तर सत्य , खसी गाडा पनि सुनसरीमा"